Xoojinta sharciga lagu dagaalamayo sharaf-dilka Internet laga sameeyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xoojinta sharciga lagu dagaalamayo sharaf-dilka Internet laga sameeyo
La daabacay torsdag 14 november 2013 kl 12.56
Waxaa la doonayaa in la adkeeyo sharciga si ay u fududaato in xukun lagu rido dad badan oo dadka ugu hanjaba, uguna ceebeeya boggaga Internet. Waxaa waayadii dambe soo kordhay hanjabaadaha iyo falalka ceebeynta oo dadka loogu geysto boggaga internet, taasoo ay ugu wacan tahay farsamooyin cusub oo uu sharcigu ka dib-dhacay. Sidaas awgeed ayey dowladdu dooneysaa in sharciga wax laga beddelo iyadoo berri baarlamaanka hordhigeysa hindise cusub oo sharciga ku saabsan.
Wasiiradda caddaaladda Beatrice Ask ayaa telefishanka SVT u sheegtay in loo baahan yahay in sharciga wax laga beddelo:
- Sida xaalku maanta yahay aad ayey ugu cakiran tahay xeerilaaliyaasha in ay arrimahaan gudagalaan.
Nacaybkaan ballaaran oo internet laga faafiyaa waxay ku soo noqdeen kadib markii dumarka oo caan ah ay telefishanka ka akhriyeen barnaamijka Uppdrag granskning ee telefishanka SVT hanjabaado iyo falal sharaf-dil oo loo geystey. Waxaa kaloo in arrintaan si gaar ah loo eego ahmiyad siiyey dhacdii Instagram, halkaas oo ay gabdho dhallinyaro ahi sharaf-dil iyo afla-gaaddo ugu geysteen gandho kale oo dhallinyaro ah.
- Nacaybka laga fidiyo Internet wuxuu waxyeelo gaarsiiyaa rag iyo dumarba, iyo shakhsiyaadka ku jira dhaqdhaqaaqa HBTQ. Waxayse si gaar ah wax u yeeleeyaan dumarka iyo gabdhaha, oo badanaaba loo geysto sharaf-dil galmada la xiriira. Dumarkaasna waxaa jinsigooda loogu aflagaaddeeyaa fekerkooda oo ay dhiibtaan awgiis. Sidaasna waxaa telefishanka SVT Nyheter u sheegtay wasiiradda sinnaanta ragga iyo dumarka Maria Arnholm (FP) oo intaas ku dartay in ay wax ka qabashada arrintaani muhiim u tahay dowladda.